Nzvimbo iyi yakavambwa ma Franz-L. Keck.Akaberekwa mugore ra 1960. Akashanda ari muZimbabwe kubwa mugore ra 1982. Aishanda ari kudiva rekushambadza. Uye ari mukuru uye mumiriri wezvezvipfeko nemachira.
Nzvimbo ye LITTLEZIM yakasimudzirwa na Ronika Tandi. Akazvarwa mugore ra 1976 Chizvarwa cheku Africa. Anoveza matombo. Mudzidzisi we Art kuvana nevakuru vakaremara uye vasinganzwe. Mutungamiri wezvikwata zvekushanda. Anobatanidza zvikwata izvi.
Afrika yakapfuma uye yakanaka. Yakapfuma Muzvicherwa nenharaunda uye vanhu veko vane hushamwari uye zvipo zvekuvamba zvinhu nehuchenjeri. Vane tsika nemagariro uye zvinoyera tisingakangawe Art.
Zvose izvi tinoda kuzviunza pedyo nemi. Tine mhemberero uye zvikwata zvekushanda. Ikoko munosangana nesu ne shamwari dzedu uye vavezi. Munoita mukana wekudzidza zvakawanda.
Torai nguva yenyu munzwe , muone, nokupfekwa nemweya wezvivezwa zvedu. Maitiro atinota uye kuzvirongedza.
Mweya wekubatana uri mukati mewatema uyo wakange waonekwa kare na Nelson Mandela kuti unounza nyika dzinoyewedza. Munku wese anokwanisa uye anofanirwa kubatsira nehunyanzvi uye samba rake hapana anoiswa kunze mukubata pamwe.
Chakakosha kushanda pamwe murunyararo taktarisa nharaunda. Ku Birkenried pa littleZIM tinodzidzisa hunhu. Nedzimwe nguwa tinotora nguva refu kuti. Tibatanidze maonero uye mafungiro akasiyanasyana.
Mishandira pamwe yedu yehundhu tinowana mwega wekubatana uye runyararo.